पे’न्टी घु’डा’मा अनि श’रि’रमा भि’त्रि क’पडा मा’त्रै, घ’रको चा’रै त’लामा त’लैपि’च्छे चा’वी तर क’सरी घर बा’हिर पु’ग्यो श’व ? - Nepali in Australia
July 12, 2021 autherLeaveaComment on पे’न्टी घु’डा’मा अनि श’रि’रमा भि’त्रि क’पडा मा’त्रै, घ’रको चा’रै त’लामा त’लैपि’च्छे चा’वी तर क’सरी घर बा’हिर पु’ग्यो श’व ?
झा’पा’को बि’र्तामो’डमा आ’ज बि’हान आ’फ्नै डे’रा अ’गाडि अ’र्ध’न’ग्न अव’स्थामा श’व फे’ला प’रेकी यु’व’ती’को घ’टना’स्थ’लमा प्रह’रीले ता’लिम प्रा’प्त कु’कुर ल्या’एर अ’नुसन्धान था’ल्ने त’यारी ग’रेको छ ।
यु’वती’को र’ह’स्य’म’य मृ’त्यू भ’एका का’रण कु’कुरबाट घ’टनाबा’रे थ’प अ’नुसन्धानका ला’गि झा’पा प्र’हरीले कु’कुर म’गा’एको छ । कु’कुरसँगै चि’कित्सकले घ’टना’स्थ’लको अ’ध्य’यन ग’र्नेछन् ।बि’र्तामो’डस्थित पू’र्वपश्चिम रा’जमा’र्गको सु’गम पे’ट्रोल प’म्प उ’त्तर बि’र्तामोड–५ मा आ’फ’न्त’सँग डे’रा ब’स्दै आ’एकी २५ व’र्षीया सृ’जना ब’स्नेतको श’व अ’र्ध’न’ग्न अ’वस्थामा फे’ला परे’को हो ।
प’रिवार’का अ’नुसार उ’नी रा’ती आ’फ्नो को’ठामा सु’ते’की थि’इन् । चार त’ले घ’रको मा’थिल्लो त’ला’मा ब’स्ने ती यु’वतीको श’रिर’मा भि’त्रि क’पडा मा’त्रै छ । पे’न्टी घोँ’डा’मा दे’खि’एको प्र’त्य’क्ष’द’र्शीले ब’ताएका छन् । ब’स्नेत सु’ते’को को’ठा बा’हि’र’बाट चा’वी ल’गा’इ’ए’को छ, यु’व’ती त्यै को’ठको मु’नी फे’ला प’रेकी छ’न् ।
सो घ’रको चा’रै त’लामा त’लै’पि’च्छे चा’वी ल’गाइ’एको र स’बैभ’न्दा मु’नी’को मु’ख्य गे’ट’मा स’मेत भि’त्रैबाट चा’वी ल’गा’एको बु’झि’ए’को छ । स’ह’का’री’मा सं’क’ल’क’को रु’पमा का’र्यरत ब’स्नेतको श’व हे’र्दा र’ह’स्य’म’य पा’इए’को छ ।आ’फु सु’त्ने को’ठ’बाट हा’म्फ’लि’न भ’न्दा उ’नको श’रि’र’मा क’सरी चो’ट ला’ग्यो ? अ’र्ध’न’ग्न क’सरी भ’इन् ? फे’रि स’बैति’र’बाट चा’वी ल’गाउँदा घ’रमा को–क’सरी प्र’वे’श ग’र्यो ?
थप समाचार – भा’रतको ज’यपुर सहरमा च’ट्याङका कारण क’म्तीमा ११ जनाको मृ’त्यु भएको छ। आ’इतवारको घ’टनामा धेरै जना घा’इते भएका छन्। पी’डि’तहरूले १२औ श’ताब्दीमा बना’इएको प्र’ख्यात प’र्यटकीय स्थल आ’मेर कि’ल्लामा से’ल्फी खि’चिरहेका बे’ला घ’टना भ’एको बताइएको छ।
त्यस बेला कि’ल्ला र आ’सपा’सका स्थानमा २७ जना रहेको र ती’मध्ये केहीले भु’इँ’मा हा’म फा’लेको बताइएको छ। सन् २००४ यता भारतमा च’ट्या’ङका कारण दुई हजार भन्दा बढीको मृ’त्यु भएको छ। एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले स’ञ्चारक’र्मीहरूलाई बताए अनुसार कि’ल्ला पर्यटकहरू मा’झ चर्चित छ।
उनका अनुसार मृ’त्यु हुनेमा अधि’कांश यु’वाहरू छन्। राज’स्थानका वि’भिन्न स्थानमा आइतवार नै च’ट्या’ङका कारण थप नौ ज’नाको मृ’त्यु भएको स्थानीय सञ्चार मा’ध्यमहरूले जनाएका छन्। राजस्थानका मु’ख्यमन्त्री अ’शोक गहलौतले मृ’त्यु हु’नेहरूका परिवारलाई क्ष’तिपू’र्ति बा’पत ५००,००० रूपैया दिने घो’षणा गरेका छन्।
भा’रतको उ’त्तर प्रदेश राज्यमा पनि च’ट्या’ङ ला’गेर २८ जनाको मृ’त्यु भएको बी’बीसी हिन्दीले ज’नाएको छ। तीमध्ये १३ जनाको मृ’त्यु प्रयागराज भ’निने स्थानमा भएको ब’ताइएको छ। तीव्र वर्षा हुने भा’रतको म’नसुन सा’मान्यता जून महि’नादेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म का’यम रहन्छ।
भारतको मौ’सम सम्बन्धी वि’षय हेर्ने नि’काय इ’न्डिएन मे’टेरोलोजिकल डि’पार्टमे’न्टले ज’लवायु स’ङ्कट ल’गायतका विषयका का’रण सन् १९६० यता भा’रतमा च’ट्याङका कारण ज्या’न गु’माउनेहरूको सङ्ख्या दो’बर भएको जनाएको छ ।त्यस्तै १९९० को सुरुवातदेखि मध्यतिरसम्म च’ट्याङका घ’टनाहरूमा पनि ३० देखि ४० प्रतिशत वृ’द्धि भ’एको बताइएको छ।
सन् २०१८मा भारतको द’क्षिणीपूर्वी रा’ज्य आ’न्ध्र प्रदे’शमा मात्र १३ घण्टामा च’ट्याङका ३६,७४९ घटना रे’कर्ड भएको प्र’काशमा आएको छ। अ’धिका’रीहरूका अ’नुसार त्यस्ता घ’टनाहरू रू’खहरूको सङ्ख्या क’म रहेको क्षे’त्रमा ब’ढी हुने पा’इएको छ